कति मानव शरीर मा कक्षहरू? जो मान्छे सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो?
मानव शरीर के ज्ञात छ? कसरी धेरै वयस्क मानव शरीर मा कक्षहरू? तिनीहरूले बढ्न र विकास रूपमा, तिनीहरूले के हुन्? संसारमा वैज्ञानिकहरूले यी पहेली समाधान गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ।
एक सेल के हो?
वैज्ञानिकहरूले बोट जीव, जनावर, मान्छे अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। केज - यो कुनै पनि जीव को सानो अंश हो। मानव शरीर त्यहाँ धेरै 100 ट्रिलियन भन्दा बढी छन्। सही नम्बर अज्ञात छ। दैनिक कति मानव शरीर मा कक्षहरू मर रहेको छ? राशि अभिप्रेत प्रयोगमा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, आंत्र epithelium मा - 70 अर्ब प्रति दिन, रगत -2अर्ब, र स्नायु प्रणाली कक्षहरू मृत्यु पछि सुधारना छैन।
1665 मा पाइने कक्षहरूको पहिलो पटक रबर्ट Guk। उहाँले व्यक्ति पुरानो, आफ्नो शरीर यी संरचनात्मक तत्व को अधिक भनेर बुझे। , потому что они отмирают и рождаются ежеминутно. यो किनभने तिनीहरूले जन्म हो, मानव शरीर मा कक्षहरूको संख्या गणना र हरेक मिनेट मर्न असम्भव छ।
संरचना र कार्य
हामी भन्न सक्छौं छैन मानव शरीर मा कक्षहरू बारेमा धेरै, तर वैज्ञानिकहरू तिनीहरूले एक जटिल संरचना छ कि निश्चित लागि थाह छ। सबैभन्दा समावेश को:
कोर, यो हृदय कक्षहरू भनिन्छ;
endoplasmic reticular गठन;
pits र pores;
सेल झिल्ली, निष्ठालाई सुनिश्चित जो, intracellular ब्यालेन्स regulates।
समारोहहरुमा पदार्थ को संश्लेषण सम्बन्धित। ग्रन्थि कक्षहरू हर्मोन वा इन्जाइमहरु उत्पादन। इन्सुलिन - यो mammary ग्रन्थीहरूको दूध, अग्न्याशय उत्पादन। केही संश्लेषित छैन, जस्तै मांसपेशी कक्षहरू।
कति मानव शरीर मा कक्षहरू बिना तिनीहरूले बाँच्न सक्दैन। कक्षहरू मोशाको तत्व एकल शरीर फारम छन्।
के को मान्छे को नसाहरु मार्फत बग्छ कि तरल छ? यो प्लाज्मा र सेलुलर तत्व समावेश छन्:
रातो रक्त - रातो रक्त;
सेतो रक्त - सेता रक्तकोषहरू।
आफ्नो सामग्रीको घनत्व र रगतको रंग भर पर्छ। यो शरीर मा रसायन को स्थानान्तरण बाहिर वहन। кровяных клеток. एक वयस्क शरीर लगभग 50 अर्ब रक्तकोषहरू। यसको बारेमा 5.5 लिटर छ।
छाला, कपाल, आँखा को रंग र केही आन्तरिक अङ्गहरू लागि जिम्मेवार मानव शरीर मा Melanocytes। यस्तो कक्षहरू आफ्नो कार्य कारण cytoplasm Pigments भित्र समावेश गर्दछ। Melanocytes पनि यूवी रेज विरुद्ध सुरक्षा समारोह टेनिंग लागि जिम्मेवार छन् प्रदर्शन। वुडी को प्रकार को कक्षहरू।
को स्नायु प्रणाली को कक्षहरू
यो मृत्यु पछि छैन पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने को छ। आफ्नो वैज्ञानिक नाम - न्यूरन्स। प्रक्रिया र तिनीहरूलाई उत्पादित बिजुली दलहन द्वारा जानकारी प्रसारित - आफ्नो कार्य। न्यूरन्स धेरै प्रकार मा विभाजित छन्:
संवेदी (प्रकाश, ध्वनि गर्न प्रतिक्रिया लागि जिम्मेवार);
संरचना एक शरीर समावेश सेल, dendrite, axon। आफ्नो संरचना अनुसार, ती धेरै समूह विभाजित छन्। मानव स्नायु प्रणाली बारे 10 अर्ब न्यूरन्स समावेश गर्दछ। हरेक वर्ष बारेमा 10,000 मर्न र अब बरामद। को व्यक्ति पुरानो, कम रहनेछ।
कति शरीर मा कक्षहरू प्रजनन लागि जिम्मेवार छन्? शुक्राणु - - र महिला - अन्डा तिनीहरूले मानिसहरू विभाजित छन्, दुई प्रकार हो। यो cytoplasm को एक ठूलो रकम समावेश देखि पुरुष प्रजनन सेल आकार, महिला भन्दा धेरै ठूलो छ। तिनीहरूले पहिलो 1677 मा पत्ता थिए, तर सर्तहरू आफूलाई प्रारम्भिक 19 औं सताब्दी मा देखा छन्।
यो मानव शरीर मा कक्षहरू कति ठीक भन्न असम्भव छ, जबकि, शोधकर्ताओं मा लगभग आफ्नो प्रजाति सबै देख्यो। आफ्नो सहभागिता सिधै ग्रह पृथ्वी मा सबै जीवनको अस्तित्व जोडिएको छ। वैज्ञानिकहरूले कसरी अनुसन्धान प्रयोगशालाहरुमा कक्षहरू मानव बढ्न सिक्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। सायद तिनीहरूले सफल हुनेछ।
बहुलवाद - एक बाहुल्य
मानविकी र बहस गर्ने बीसौँ शताब्दीमा यसको भूमिका बारे
शिक्षामा खेल प्रविधि।
Communicative भाषण गुणस्तर
मुद्रा मान र विदेशी विनिमय लेनदेनको प्रकार। वर्तमान मुद्रा कारोबार र अपरेसन राजधानी को आन्दोलन सम्बन्धित
थर्मोन्यूक्लियर बम र यसको इतिहास
को घाँटी मा हड्डी। को तरिका यो छुटकारा रही।
फुलेको प्रारम्भिक चरण: वर्णन, गराउँछ, विशेष गरी रोकथाम र उपचार
आफ्नै हातमा मुलायम खिलौने: नमूना कुखुरा
इस्राएलका कलेजो क्यान्सर उपचार
क्सीनन PTF कसरी स्थापना गर्ने?
Mallorcan Reservoir: ओरेनबर्ग क्षेत्र निमन्त्रणा
सूर्य हो ... सौर प्रणालीको मात्र तारा
कांस्य बाल रंग: तस्वीर, जसले छ?
आगमन पात्रो - यो के हो? तपाईंको आफ्नै हातमा कसरी बनाउने?
आफ्नो हातमा गुडिया-बक्स: needlewomen लागि विस्तृत मास्टर वर्ग
Teething बच्चाहरु: सुझाव र चाल